LED fiber optic kit xiddiga saqafka derbiga iyo saqafka decoration - Shiinaha KepuAi Photoelectric
Side siyasad Fiber Optic
Fiber Optic ubaxa
Crystal End suurawdo
Products iyo Project Videos
Xirmada optic iftiin Fiber
Fiber Optic Ubaxa Siraaj, decoration indoor f indhaha ...
Fiber Optic Light Source, illuminator, borojektar
optic Fiber Saqafkii Star iftiin ceilin Kit Lights Car ...
Fiber optic nalalka pool fiber optic cable Gogosha ...
Fiber optic iftiin la surto oo makhaayad dheertahey, kulul ...
25W RGBW LED fiber optic fibe dhac daah roob ...
RGBW LED Fiber optic iftiin Star Lights Kit Saqafkii
LED fiber optic kit xiddiga saqafka derbiga iyo ceilin ...
LED fiber optic kit xiddiga saqafka derbiga iyo saqafka decoration
Brand Fiber: Taiwan AiLi
Ballaca Fiber: 0.75mm & 1.0mm
Tiro Fiber: 200 qaybood / 300 qaybood
Aagga decoration: 4 square meter / 6 mitir oo laba jibbaaran
Codsiga: Wall & saqafka
1. Midabada 16W RGBW 8 Color Beddelidda LED Optic Lights Star Kit Saqafkii
2. gacanta Remote on / off biiro, gacanta Remote ama buuggan, 20 hago distence, qabsado isbedelka midabka iyo xawaaraha.
3. nalalka Remote lahayn korontada, kulaylka, UV, iyo infrared.
model Codsiga fiber Source Light faahfaahinta
AL-JTTZ-1 Wall / Qurxinta Saqafkii (qurxin karaa 2-4 derbiyada samada skm iyo saqafka) Brand: AiLi
Ballaca: 0.75mm / 1.0mm 5W Tirada: 200pcs
cimri fiber kasta: 2, 3
AL-JTTZ-2 16W Tirada: 200pcs
AL-JTTZ-3 Wall / Qurxinta Saqafkii (qurxin karaa 4-5 derbiyada samada skm iyo saqafka) 16W Tirada: 300pcs
cimri fiber kasta: 2, 3, 4
Sidee si loo soo dajiyo,
Shenzhen Kepuai photoelectric Technology Co., Ltd waa soo saaraha a sare iyo qeybiyaha ah Fiber optic nidaamyada iyo nalalka LED tan iyo sannadkii 2008.
Waxaan leenahay sanado badan oo khibrad ah gudahood warshadaha iyo si joogto ah qaar ka mid ah kuwa ugu qiimaha shaqeeyaan samaynta nalalka iyo injineero ee dunida.
Iyada oo aynu awoodaha design iyo injineernimada xoog iyo shaqaalaha aqoon, waxaan leeyihiin khayraadka la heli karo si ay u sameeyo oo dhan ah waxyaabaha our in-guriga at our 20,000 square foot in Longgang degmada Shenzhen, Shiinaha, waxa intaa dheer, waxaan leenahay dukaanka proformance ee North Huaqiang a waayo, jeegga style macaamiisha ' . Our isku filnaashaha badan habka wax soo saarka oo dhan waxay ka dhigan tahay oo keliya ma aha in aan ku siin karaan jeer hogaanka gaaban on amar ka badan nala tartamaya, laakiin sidoo kale la huriyo nidaamyo waxaa loogu talagalay in looga baahan yahay saxda ah macaamiisheena '.
Sidaas daraaddeed haddii aad raadinayso in ay ku habboon baxay casino leh nalalka xiddiga saamayn, rakibi dabaasha leh nal midab beddelo, ama amar hal-of-a-nooc dheertahey ah makhaayad aan karaan bixiyaan xal u baahidaada.
Waxaan nahay koox dhallinyaro ah oo xoog ah.
Our Ujeeddo: Keenida nalalka tayada iyo ammaanka si ay nolosha.
Focus on Suuqa
Focus on baahida our macaamiisha, macaamiisha iyo distributors
bax suuqa oo maqla, dhawra oo bartaan
hanti view caalami ah
Focus on dil suuqa dhexdiisana ayuu maalin walba
Iska insatiably cajiib ah
Baako Standard: sanduuqa kartoonka.
Baako for dheertahey: sanduuqa Wooden.
1, waxaan dooran karaa daydo kala duwan macdantaa in ay isticmaalka isku dhafan?
Haa, waxaad dooran kartaa nooc kasta oo kala duwan iyo in ay isticmaalka isku dhafan.
2, waxaan heli karaa baarka?
Haa, soo dhaweyn si aad u hesho shaybaarka baaritaanka.
3, Sidee baan ku rakiban kartaa fiber optic iftiin muuqaalka dibadda nafsaddayda?
Waxaa edbinta iyo sawiro ku imanaya isagoo leh alaabta, raac uun, fudud oo sahlan si loo soo dajiyo.
Haddii wax su'aalo ah, fadlan si xor ah u email ii at carrie@szkepuai.com, ama wac +86 137 6034 3155.
Previous: Mitsubishi End siyasad caaga Fiber Optic Cable
Next: RGBW LED Fiber optic iftiin Star Lights Kit Saqafkii
codsiga ee fiber indhaha
ugu fiican cable fiber optic
saqafka optic fiber
saqafka fiber optic
shirkadaha fiber optic
design fiber optic
dhar fiber optic
fiiloyin fiber optic
kit optic fiber
nalalka fiber optic
optic fiber qiimaha
waxyaabaha fiber optic
mashaariicda fiber optic
skylight fiber optic
xal fiber optic
il fiber optic
xiddiga optic fiber saqafka
fiber optic qaybood
geed fiber optic
shaqada fiber optic
codsiyada fiber optics
isticmaalka fiber optics
fiber caag ah
nalalka saqafka fiber optic
horseeday nuurka optic fiber
iftiinka fiber optic
dhexroor indhaha fiber
nalalka fiber indhaha
codsiyada fiber indhaha
isticmaalka fiber indhaha
indhaha shaqada fiber
optic fiber caag ah
Xirmada optic fiber samada
nooc oo fiber indhaha